MM Qabridahar Oo Si Balaadhan Looga Xusay Maalinka Haweenka Aduunka - Cakaara News
MM Qabridahar Oo Si Balaadhan Looga Xusay Maalinka Haweenka Aduunka
Qabridahar (cakaaranews)Arbaco 8da March 2017. Munaasabad lagu maamusayo Xuska Sanad Guurada 41aad ee maalinka Haweenka Aduunka Ee 8da march ayaa maanta si wayn looga xusay maamulka magaalada Qabridahar. Iyadoo xuskana ay kasoo qaybgaleen kabinetka Maamulka Magaalada Qabridahar oo uu ugu horeeyo maayorka maamulka magaalada qabdridahar marwo Ifraax Cumar Muse, madaxa xafiiska Arrimaha Haweenka iyo caruurta MM Qabridahar marwo sucaad Khadar Madaxa arimaha siyaasa XDSHSI, Haweenka MM Qabrdahar, iyo martisharaf kale-duwan.
Hadaba, xuskan ayaa waxaa furitaankiisii kahadlay Maayorka Maamulka Magaalada Qabridahar marwo Ifraax Cumar Muuse oo sheegatay in maanta ay tahay 8da march oo ah maalinka loo aqoonsaday heer caalam inay tahay maalinka haweenka islamarkaana ay tahay sanad guuradeedii 41aad. Maayorka oo hadlkeeda siiwadata ayaa soo jeedisay hanbalyo dhamaan haweenka dalka gaar ahaan haweenka DDSI iyadoo tilmaantay in haweenka deegaanku ay yihiin kuwo markasta taageero uhay horumarka deegaanka sida xawliga ah uga socda.
Sidookale, Madaxa Xafiiska Arrimaha Haweenka iyo Caruurta MM Qabridahar marwo Sucaad Khadar ayaa iyadna madasha kasoojeedishay khudbad muhiim ah. Iyadoo ugu horayn u hanbalyaysay haweenka Deegaanka. Marwada ayaa waxay siwan u tibaaxday maanta deegaanku siduu yahay, hada kahor sida uu dumarka deegaanku ahaa iyo isbadalka wayn ee u dhaxeeya, Kaalinta ay dumarku ku leeyihiin fagaarayaasha siyaasada iyo waliba dhinacyada dhaqan dhaqaale. Iyadoo sheegaty in haweenku ay leeyihiin 35% ee golaha xildhibaanda islamarkaana ay siwayn uga dhaxmuuqdaan golaha fulinta madaxwayne kuxigeenka DDSI ay tahay gabadh waxbaratay islamarkaana aqoon iyo kartiba leh marwo sucaad axmed faarax. Sidookale waxay carbka ku adkaysay in maanta meesha ay haweenku taagan yihiin uu gaadhsiiyay XDSHSI kadib markii uu si xaq ah u sugay dhamaan xaquuqihii ay lahaayeen haweenka deegaanku oo waligii intuu deegaanku jiray aysan helin haweenku.
Dhankakale, Madaxa Arrimaha Siyaasada XDSHSI Mudane Axmed Yaasiin Cali oo isna kahadlay munaadsabadan ayaa ugu horayn uhanbalyeey dhamaan hooyooyinka iyo waliba gabdhaha deegaanka isagoo xusay in maanta ay tahay maalin lagu maamusayo doorka ay haweenku kuleeyihiin deegaanka haday tahay nabadgalayo, horumar iyo maamul suuban. Waxuuna carabka kudhuftay in kaalinlaxaad leh ay kuleeyihiin horumarkan balaadhan ee deegaanku ku talaabsaday. Isagoo xusay in horumarkan iyo kaalinta ay kuleeyihiinba ay sii labo jibaaran.
Iskusoowada duuboo, munaasabadan ayaa kusoo dhamaatay jawi aad u wanaagsan oo farxadi kudheehantahay.